जानीराखौँ, पानीपुरी र चटपटे खानु फाइदा कि बेफाइदा ? | Tapaiko Khabar
जानीराखौँ, पानीपुरी र चटपटे खानु फाइदा कि बेफाइदा ?
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : कात्तिक १५, २०७५ शिक्षा-स्वास्थ्य
काठमाडौं । नेपालमा पनि युवा पुस्ताले मन पराउँछन्, पानीपुरी र चटपटे । भारतको मगध क्षेत्रबाट सुरुवात भएको पानीपुरी अहिले विश्वका धेरै देशहरुमा यसको माग बढिरहेको छ । नेपालमा पनि अधिकांश युवक युवतीहरु पानीपुरी र चटपटे खाने गर्छन् । यो गाउँदेखि शहरसम्ममा लोकप्रिय बनेको छ ।
स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको पानीपुरी खाँदा शरीरमा असर गर्दैन । स्वास्थ्यलाई हानिकारक मानिएका बस्तु नमिसाइएको पानी खाँदा भने शरीरलाई एसीडिटीबाट राहत दिलाउँछ भने मुडलाई फ्रेस बनाउँछ। युवतीहरु साथीसँग रमाउन र मित्रतालाई सधैँ गाढा बनाइ राख्न पनि यसले ठूलो भुमिका खेलेका हुन्छन्। चार वटा पानीपुरीमा करीब सय क्यालोरी हुने गर्छ।
तर, अस्वस्थ रुपमा बनाइएको पानीपुरीमा खाएमा भने स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । सडक पेटीमा ठेलागाडामा पानी चटपटे र पानीपुरी खाँदा भनेस्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने खालका हानिकारक तेलको प्रयोग गरेको पाइएको छ । केही महिनाअघि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो।
टोलीले चाबहिलस्थित धोविखोलानजिक एक कवाडी पसलबाट दूषित र हानिकारक तेल बिक्री गरेको फेला पारेको हो। यसअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ठेलामा राखेर बिक्री गरिने ससेज, पानीपुरी, चटपटे दूषित रहेको फेला पारेको थियो।
यस भन्दा अगाडीकाङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रम भोलि, एक लाखलाई निम्ता
यस पछिअख्तियारद्वारा जनकपुर विकास परिषद्का अध्यक्षसहित १०जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
पानीपुरी र चटपटे